महन्त ठाकुरले केपी ओली अगाडी आत्मसमर्पण गरे : सीके लाल [अन्तर्वार्ता ]| Yatra Daily
यात्रा डेली जेठ ३, २०७८ सोमबार
मधेस आन्दोलनको बलमा स्थापित जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्ष र विपक्षमा विभाजित छ। महन्थ–राजेन्द्र समूह ओलीको पक्षमा लागेकै कारण विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके पनि विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्न सकेन। गएको वर्ष उनैले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशकै कारण तत्कालीन राजपा र समाजवादी पार्टी एकताका लागि वाध्य भए–बनाइए। अहिले फेरि ओलीकै कारण जसपा विभाजनको संघारमा पुगेको छ। जसपा विवादमा मधेश एजेन्डा कहाँ पुग्यो ?एकता कायमै रहन्छ वा जसपा विभाजित हुन्छ?– यिनै प्रश्नको सेरोफेरामा राजनीतिक विश्लेषक सीके लालसँग गरिएको कुराकानीः
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्ष र विपक्षमा बाडिँदा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले उठाउँदै आइरहेको मधेसको एजेन्डा अहिले कता पुगेको छ?
प्रथम मधेस विद्रोहको झन्डा बोकेका उपेन्द्र यादव सरकारमा सामेल भएर ध्वस्त पार्नुभयो। दोस्रो मधेस विद्रोहको नेतृत्व लिनुभएका महन्थ ठाकुर चुनावमा भाग लिएर ध्वस्त पार्नुभयो। तेस्रो मधेस आन्दोलनको विद्रोह लिनुभएका राजेन्द्र महतो पनि समाप्त हुनुभएको छ। तीनवटै मधेस विद्रोहमा ‘कमा’ हुँदाहुँदै अब ‘फुलस्टप’ लागिसकेको छ।
केपी ओलीसँग झुकाव त के हुन्छ र ? उहाँहरूले हेर्नुभयो–अरू कुनै बाटो नै छैन। आत्मसमर्पण गरिसक्नु भएको छ। जसरी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आत्मसमर्पण गर्नुभएको थियो, त्यसैगरी उहाँहरूले पनि आत्मसमर्पण गर्नुभएको छ। यही देशमा बस्नु छ, यहीँ बाँच्नु पर्नेछ। एउटा भनाइ छ ‘पानीमा रहेर मगरमच्छसँग बैर गर्नुहुँदैन’ भनेर। उहाँहरू यही सिद्धान्ततर्फ लाग्नुभयो।
मधेस एजेन्डालाई उहाँहरूले बिराम दिनुभएको जस्तो तपाईंलाई लागेको हो?
हो। आत्मसर्पण गरेर उहाँहरूले मधेस आन्दोलनको एजेन्डालाई बिर्सनु भएको जस्तो मलाई लागेको छ। अब सामान्य प्रकृतिका मुद्दा लागेकाहरूलाई रिहा गरिदिनु भनेको प्रशासनिक लेनदेनमात्र हो। आन्दोलनको एजेन्डासँग कुनै लेनदेन छैन।
आयोमेल डटकमबाट साभार ।